Ny lakandranon'i Suez dia lakandrano any Ejipta, eo anelanelan'ny Ranomasina Mena sy ny ranomasina Mediteranea. 190,25 km ny halavany, 280-345 m ny ampohiny, ary 22,50 m ny halaliny. Miampita ny isman'i Suez izy, avy any Port-Saïd eo amin'ny ranomasina Mediteranea, hatrany amin'ny tanànan'ny Suez eo amin'ny ranomasina Mena. Afahan'ireo ranomasina roa ireo mifandray.
Nanomboka tamin'ny 1859 ilay tetikasa fandavahana azy, ary tapitra tamin'ny 1869 izy. Ny diplômata sy inzeniera frantsay Ferdinand de Lesseps no nitondra ilay tetikasa. Io lakandrano io dia afahan'ny sambo avy ao Eoropa makany India tsy mila mandalo any Afrika atsimo eo amin'ny Cap de Bonne Esperance. talohan'ny fanokafana ilay lakandrano tamin'ny 1869, ny entana dia tsy maintsy entina amin'ny tany eo anelanelan'ny Ranomasina Mediteranea sy ny Ranomasina Mena.
Noho ny fahombiazany noho ny fitombon'ny isan'ny sambo mandalo ao, ny lakandranon'i Suez dia fidiram-bola fahatelo any Ejipta. Raha sanatria misy voina manentsina ilay lakandrano, ny vola very amin'izany dia misy 7 tapitrisa dollar isan-andro.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakandranon%27i_Suez&oldid=602501"
Voaova farany tamin'ny 11 Martsa 2013 amin'ny 11:11 ity pejy ity